रंगशालामा भाँजो नहाल – Chitwan Post
रंगशालामा भाँजो नहाल
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ १७, २०७६
घटनाका नाइके नेकपाका स्थानीय नेता प्रकाश कँडेल र भत्काइएको बार ।
राष्ट्रिय गौरवका रुपमा भरतपुर महानगर–१५ स्थित रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बार बुधबार बिहान डोजर लगाएर भत्काएको खबर सार्वजनिक भएपछि देशविदेशबाट सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम कलाकार दम्पती (धुर्मुस–सुन्तली)ले पूरा गर्ने अदम्य साहस बोकेर निर्माण अभियानमा होमिएका थिए । तीन अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको सो आयोजनाको जिम्मेवारी लिनु आफैँमा ठूलो दुस्साहस र चुनौती थियो र छ । तथापि, देशविदेशका खेलप्रेमी सहयोगी दाजुभाइ दिदीबहिनीको हौसलाले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत कलाकार सीताराम कट्टेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने चुनौती मोलेका थिए । तर विडम्बना ! सो आयोजनाको डीपीआरसमेत निर्माण नहुँदै केही उच्छृङ्खल र विकासविरोधी त¤वहरुले रंगशालाको बारमा डोजर चलाएर दुनियाँ हँसाएका छन् । बार भत्काउने नाइके प्रकाश कँडेल नेकपाको स्थानीय नेता मानिन्छन् । सुरूवातमा धुर्मुस–सुन्तलीलाई घडा र फूलमालाले स्वागत गर्ने स्थानीयवासीसमेत रमिते बनेर संरचना भत्काउन उद्यत भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यतिबेला धुर्मुसले पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको अनुभूत गरेर रूँदै काम गर्ने वातावरण नरहेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
गुन्डागर्दी र अराजनीतिक स्वभाव देखाएर बेलाबेलामा आलोचित बनिरहने रामपुरले पुरानै प्रवृत्ति देखाएको छ, जसले देशविदेशमा रहने आमनेपालीलाई दुःखी तुल्याएको छ । बुधबार बिहान अभियन्ता धुर्मुसकै सामुन्नेमा डोजर चल्दा उनले देखेको सपनामाथि बलात्कारमात्रै भएको छैन, देशविदेशका सहयोगी युवाको पसिनामाथि खेलबाडसमेत भएको छ । शीत उभाएर घैला भर्ने विश्वासका साथ आफ्नो निजी जीवन नभनी अहोरात्र समाजसेवा र राष्ट्रको स्वार्थमा होमिएका अभियन्ताको रोदनले उनलाई कुन हदसम्म आतंकित बनाइएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । रामपुरमा क्रिकेट रंगशाला बन्ने विषयले देशभरमै आशाको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा पनि चितवनवासीका लागि त्यो अभूतपूर्व खुसीको कुरा थियो । क्रिकेट रंगशालाका लागि अनेकौँ स्थानमा जग्गा खोज्न भौँतारिएको फाउन्डेसनलाई भरतपुर महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि थप उत्साहित बनाएको थियो । किनभने, सत्तारुढ दलको नेतृत्व एवम् सोही क्षेत्रबाट सांसद् निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण पनि रंगशाला निर्माणले मूर्तरुप लिनेमा गतिलो भरोसा धुर्मुसले बोकेका थिए । महानगरको प्रतिबद्धता र सरकारको हौसलाले धुर्मुसलाई थप ऊर्जा मिलेको थियो । तर, सत्तारुढ नेकपाको नाम भजाउँदै डोजर नै लगाएर बार भत्काउने कुत्सित कार्यले धुर्मुसको मन नमज्जासँग दुखेको छ ।
चितवन प्रहरीले घटनामा संलग्न कँडेलसहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ परे पनि फाउन्डेसनका कर्मचारीलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण छैन । धुर्मुसले फाउन्डेसनको कार्यालयको घर नै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनले बुधबार नै समस्याको स्थायी समाधान र काम गर्ने वातावरण नबनेसम्म काम स्थगित गरिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । रामपुरमा क्रिकेट रंगशाला बन्नु त्यहाँका स्थानीयको लागि ठूलो सौभाग्य पनि हो । जग्गाको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, रोजगारीको अवसर, तीव्र विकास निर्माण र चहलपहल, व्यापार र आयआर्जनमा वृद्धिजस्ता थुप्रै लाभ त्यहीँका स्थानीयले उपभोग गर्न पाउने हुन् । रंगशाला निर्माण अभियानलाई सफल बनाउन अझै बढी चासो र चिन्ता पनि त्यहाँका स्थानीयमा हुनुपर्ने हो । क्षणिक लोभ र लाभका लागि जो जसले अभियानविरोधी हत्कण्डा अपनाए त्यो सर्वथा अनुचित छ । घटनामा संलग्नहरु चाहे नेकपाका नेता/कार्यकर्ता हुन्, चाहे शक्तिको आडमा धाकधम्की र आतंक सृजना गरेर लाभ लिने कुत्सित मनसाय बोकेकाहरु नै किन नहून्, उनीहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । निर्माण यन्त्रदेखि निर्माण सामग्रीको बिक्रीवितरण र कमिसनका लागि रचिएको यो षड्यन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ । तीन करोड नेपालीका भरोसा र आशाका पात्र धुर्मुस–सुन्तलीको महाअभियानमा भाँजो हाल्ने जोसुकैलाई निरूत्साहित गर्दै चाँडै निर्भीकरुपमा काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रशासनले दिलाउन जरूरी देखिन्छ ।
नकारात्मक सोचका उत्पादक : सञ्चार कि समाज ?
चितवनमा गणित कार्यशाला